रुकुम का´ण्ड : भागेर बा’चेका नवराजको साथिको ब ‘यान ( भिडियो सहित ) – Online Nepal Site
त्यसपछी के भयो ? रोड बाट जाँदै थियौ माथी बाय ढुङ्गा प्रहार भयो । मान्छेहरु धेरै आय ? उनिहरुले तपाइहरुलाइ के देखेर ढुङ्गा हाने खेदे ? के हुनु अचानक रोक रोक भन्दै ढुङ्गा प्रहार गरे । पूरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
सुस्मिताको ह $त्यारा सार्ब$जनिक भए लगत्तै ।।हेटौडा बाट एका बिहानै आयो यस्तो खबर । (हेर्नुहोस भिडियो)
नेपालको दरो तयारी नेपाललाई चीनको साथ भारतको नक्सा बदलिदिने चीनको चे,ता#वनी (हेर्नुहोस भिडियो)